FBC - Filannoon preezdaantummaa fi koree hoji raawwachiistuu federeeshinichaa dabarfame
Filannoon preezdaantummaa fi koree hoji raawwachiistuu federeeshinichaa dabarfame
Finfinnee, Amajjii 02, 2010 (FBC) – Filannoon preezdaantummaa fi koree hoji raawwachiistuu Federeeshinii Kubbaa Miillaa Ityoophiyaa dabarfame.
Kanaan dura walga’iisaa Afaar, magaalaa Samaraatti Amajjii 5,2010 gaggeessuuf waamicha dhiyeessun isaa ni yaadatama.
Haata’uutii Amajjii 1,2010 xalayaa FIFA irraa barreeffameen filannichi Amajjii 27,2010 booda akka gaggeeffamu gaafatamuusaa Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Ityoophiyaa beeksiseera.
FIFAn akka sababiittis kan kaase duursa dhimmoonni qulqullaa’uu qaban waan jiraniif, bakka buutonni FIFA fi CAF taboota waancaa Afrikaa Chaanirraa kan ka’e argamuu waan hin dandeenyee fi rakkoo filannoon booda qaqqabuu malu hanbisuufi jedheera.
Sababii kanaan federeeshinichi walga’ii filannichaa Gurraandhala 24,2010 Afaar Samaraatti gaggeessuuf murteessuusaa ibseera.
Oduu walqabataa birootin, kaadhimamtoonnii Naannoo Oromiyaa bakka bu'uun preezdaantii fi koree hoji raawwachiiftuu Federeeshinii Kubbaa Miillaa Ityoophiyaaf dorgoman, gaazexeessitootaf karoora tarsimowaa gara fuula duraa irratti guyyaa har'aa Finfinnee Hoteela Ililliitti ibsa kennaniiru.
Kaadhimamtoonni kunniin ispoortii biyyattii cimsuuf guddattoota irratti karaa sirrii ta'een hojjechuu fi hirmaannaa ummataa dabaluun murteessaa ta'uusaa eeraniiru.
Oduuwwan Biroo « Kooriyaa Kaabaa gara Olompikiitti garee ni-ergiti	Taphoonni Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 11ffaa borii jalqabee geggeeffamu »